बिना मगरको दुख : पहिला किन गरिनस्, अहिले किन गरिस् ? : RajdhaniDaily.com - अहिले किन गरिस् ?, बिना मगरको दुख : पहिला किन गरिनस्
Home प्रमुख बिना मगरको दुख : पहिला किन गरिनस्, अहिले किन गरिस् ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि निवर्तमान खानेपानीमन्त्री भएकी बिना मगर अहिले परिवारका सदस्यसंग रमाउन थालेकी छिन् । दाहाल नेपाल समुहले आयोजना गरेको विभिन्न भेलाहरुमा सहभागी हुँदै वालक छोराहरुलाई आफुसंगै घुमाएर मातृ वात्साल्यको अनुभुती संगाल्दै छिन् । विभिन्न पदमा हुँदा घर परिवारलाई समय दिन नसकेकी बिना राजनितीकर्मी मात्रै भएर आमा पनि बनेकी छिन् ।
पछिल्लो पटक उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकबाट एउटा तस्विर सार्वजनिक गरिन् । जुन तस्विरमा एउटा कारमा उनी सहित उनका दुई छोरा र भान्जी छन्, कतै जाँदै गरेका । क्याप्सनमा लेखेकी छिन् ‘हामी यता छौं ।’
नातामा नेकपा दाहाल नेपाल समुहका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कि बुहारी हुन् बिना । उनका छोरा प्रकाशको निधन भइसकेको छ भने प्रकाशको निधन भए लगत्तै उनले प्रकाशको जेठी श्रीमतीबाट जन्मेका छोरालाई पनि आफुसंगै राखेर हुर्काएकी छिन् । परिवारका सदस्यका अनुसार सौताको छोरालाई पनि असाध्यै माया गर्छिन् उनी ।
राजनितीमा कलिलै उमेरमा छलाङ मारेकी बिना जिम्मेवारी पाए लगत्तै आलोचना खेप्ने पात्र मध्येमा पर्छिन् । ससुराको कृपाले खानेपानी मन्त्री पद पाएको अभियोगसंगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट इटालियन कम्पनीले हात झिक्दा बिनालाई ठूलै रकम माग गरेको अभियोग लाग्यो । यद्यपि नेपालमा राजनितीक दलमा पदासिन व्यक्तिले घुस खानुलाई संस्कारको रुपमा बुझ्ने शैलि विकास हुँदै गएकाले ठेकेदारसंग पैसा मागेको प्रसंगले खासै असर गरेन ।
कलिलै उमेरमा एकल हुन पुगेकी बिनाले श्रीमानको निधन भए लगत्तै सौताको छोरालाई असाध्यै माया गरेर आफैंले पालन पोषण गर्नु वास्तवमै सरहानिय कार्य हो तर, नेपाली समाज विवेकशील भइनसकेको हो कि भन्ने छनक बिनाको स्टाटसमा लेखिएको कमेन्टले स्पष्ट पार्छ ।
मन्त्री हुँदा बिनाले गडबडी गरेकी छिन् भने सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, छोरा र भान्जीलाई गाडीमा राखेर घुमाइन भन्दैमा ‘लुटेको पैसाले मस्ति’ भनेर टिप्पणी गर्नु उचित हुन्न कि ?
मन्त्री हुँदा पनि उनले चैनले काम गर्न पाइनन् । अरुका कुरा छाडौं प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अन्तरर्वाताको क्रममा प्रचण्डको जबरजस्तीले बुहारीलाई मन्त्री बनाएको भनाई राखे । अहिले पनि बेला मौकामा त्यही शब्द दोहो¥याइरहेका छन् ।
मन्त्री हुँदा किन काम गरिनस् भनेर प्रश्न गर्नेहरु अहिले फेरि नयाँ प्रश्न गर्न थालेका छन् ‘किन मस्ती गरिस् ?’ के कलिला छोराहरुलाई नयाँ ठाउँ घुमाउन र आमाको माया दिनु पनि बिनाको अपराध नै हो त ? उनको स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरुलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ ।
अहिले किन गरिस् ?
बिना मगरको दुख : पहिला किन गरिनस्
रासस - April 8, 2020
काठमाडौं । चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको राति मङ्गलबार आकाशमा देखिएको चन्द्रमाको फरक रङ खगोल एवं ज्योतिष शास्त्रको अध्ययनका लागि दुर्लभ घटना सावित भएको...
रुकुम । गएराति रुकुमपश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीस्थित गाउँलेहरुको कुटाइबाट जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका नवराज विकको मृत्यु भएको छ ।
नवराजसँग गएका छ युवा अझै बेपत्ता...
भर्खरै रासस - August 10, 2020
Breaking News महेश्वर गौतम - March 18, 2020
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको सुडान मिसन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । संयुक्त...
Breaking News मधुजंग पाण्डे - August 27, 2020
Featured Kumar Raut - December 20, 2019
काठमाडौं । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानको रिक्त शिक्षाध्यक्ष पदमा तीन जना चिकित्सकलाई सिफारिश गरिएको छ । प्रतिष्ठानका...
प्रमुख नरेन्द्र कार्की - March 28, 2020
दार्चुला । भारतवाट सयौं जना क्वारेन्टाइनमा नवसि गाउँमा घुमिरहेकाले ग्रामिण वस्तीमा त्रास बढेको छ । अहिले शहर बजार भन्दा पनि...